Hambalyo Soomaaliya waana maalin u xun Kenya, Qadar, madaxda sare iyo khaa’imiin kale oo Soomaaliyeed. | Somalisan.com
Home Afsomali Hambalyo Soomaaliya waana maalin u xun Kenya, Qadar, madaxda sare iyo khaa’imiin...
Hambalyo Soomaaliya waana maalin u xun Kenya, Qadar, madaxda sare iyo khaa’imiin kale oo Soomaaliyeed.
Shirkadda Batroolka ee Qatar ayaa iibsatay dhulal ka baxsan badda Kenya
Doha (Qadar), 16ka Diseembar 2018Saad Sherida Al-Kaabi, Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Tamarta iyo Madaxweynaha & Maamulaha Shirkadda Qatar Petroleum, iyo Claudio Descalzi, Madaxa Fulinta ee Eni, ayaa maanta saxiixay heshiis iib iyo iibsi si ay awood ugu yeeshaan Qatar Petroleum si ay u hesho 35% xiisaha ka -qaybgalka aagga 1, xeebta Mexico, ee Eni. Eni wuxuu sii ahaan doonaa Hawl -wadeen.
Eni wuxuu mar horeba shuraako la yahay Qatar Petroleum oo ku taal 12 Block ee aagga lagu muransan yahay ee Kenya.
Qatar Petroleum ayaa heshiisyo la saxiixatay Eni iyo Total si ay u hesho saami dhan 25 boqolkiiba saddex baloog oo ku yaal xuduudda badda Kenya.
Tanaasulaadyada la isweydiinayo waxay daboolayaan L11A, L11B, iyo L12 blocks oo ku yaal badda xeebta bari Kenya. Qatar Petroleum waxay ka heli doontaa Eni boqolkiiba 13.75, halka boqolkiiba 11.25 ay ka heli doonto Total.
Iyada oo la raacayo oggolaanshaha sharciyeynta, shuraakada ka kooban dalladdu waxay ka koobnaan doonaan Eni (wadaha) oo leh dulsaar ka qaybqaadanaya 41.25%, Isugeyn leh 33.75% dulsaarka ka -qaybgalka, iyo Qatar Petroleum oo leh 25% dulsaar ka -qaybgal ah.
Sacad Sherida Al-Kaabi, Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Tamarta iyo Madaxweynaha & Maamulaha Shirkadda Qatar Petroleum, ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan saxiixno heshiiskan si aan uga qeybgalno sahaminta aagaggaan xuduud-badeedka ee Kenya iyo inaan sii xoojinno joogitaankeenna Afrika. ”
Wuxuu yiri: “Waxaan rajeyneynaa in dadaallada sahaminta ay guuleysteen, waxaana rajeyneynaa inaan iskaashi la sameyno shuraakadayada qiimaha leh ee Eni iyo Total, iyo dowladda Kenya dhismayaashaan.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka faa’iideysto fursadan si aan ugu mahadceliyo mas’uuliyiinta Kenya iyo saaxiibbadayada taageerada joogtada ah ee joogtada ah. ”
Sida laga soo xigtay Qatar Petroleum, saddexda xayndaab ee xeebaha (L11A, L11B iyo L12) waxay ku yaalliin waxa loo arko inay yihiin soohdin iyo aag aan inta badan la sahamin oo ku yaal webiga Lamu ee bariga Kenya waxayna leeyihiin aag dhan 15,000 kiiloomitir oo laba jibbaaran, oo leh biyo qoto dheer oo u dhexeeya 1000 mitir ilaa 3,000 mitir.
Tani waa mid kale oo ah heshiisyo taxane ah oo dhowaan dhexmaray Eni iyo Qatar Petroleum. Labada shirkadood ayaa durba shuraako ku ah Cumaan, Mexico, Morocco, iyo Mozambique.
QP waxay ku biirtay heshiiska Eni ee Tarfaya ee xeebta shidaalka, oo ka kooban 12 baloog oo sahamin ah oo ku yaal badda Morocco, iyo Eni’s Block A5A oo ku taal xeebta Angoche ee xeebta Mozambique bishii Maarso 2019.
Intaa waxaa dheer, QP bishii Diseembar ee la soo dhaafay waxay heshiis la gashay Eni si ay u hesho 35% ka -qaybgalka xiisaha saddexda goobood ee saliidda badda ee Mexico.
Previous articleDUBAI — Shirkadda weyn ee dekedaha Dubai ee DP World
Next articleSomalia beats Kenya in the Hague Court on maritime borders
Shiinaha dadka oo falastiin u Aqoonsaday Dowlad Madaxbanaan
Somalisan News - December 16, 2017
Aqriso Dhaarinta ka dib hogaaminta talada dalka yaa leh ma madasha mise Xildhibaanada
Somalisan News - December 28, 2016
Xil lama diidee Bashiir Maxamed Jaamac (Goobbe) oo loo Magacaabaay Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Howlaha...
Somalisan News - October 23, 2021